Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2009
Ny tetika famonoana ny tolon'ny ara-dalàna -fizarana faharoa-
2009-07-05 @ 11:43 in Politika
Ity lahatsoratra ity dia tohin'ny lahatsoratra nosoratako tamin'ny herinandro mitondra ny lohateny hoe : "Ny ako sy ny hevitra momba ny fankalazana ny 26 jona 2009 - fizarana voalohany-". Novaina kely ny lohateny iavahana tamin'ny teo aloha mazava loatra. Tamin'ny voalohany isika dia tsy nahita loatra ny tany amin'ny tolon'ny mpandàla ny ara-dalàna. Ato no amenoantsika azy. Hiezaka ny hanafohy azy noho ny tsy fahampian'ny fotoana.
Tsy hitako io taratasy io raha tsy efa nody aho
Fotoana nandrasana hatry ny ela tokoa ity fetim-pirenena ity hanaovana fety miavaka sy tiana ho tadidin'ny tantara. Tsy tontosa anefa izany araka ny fomba fijeriko satria tsy maintsy eo ihany koa ny mitady mandrakariva ny hanohintohina na hamotika ny tolona mihitsy aza. Misy asa avy ao anatin'ny tolona sy ivelany io fitadiavam-pandravana ny tolona io. Tsarovy fa tsy maintsy hitady izay handravana ny tolona ihany koa ny mpanongam-panjakana. Ny tena tsy zakany dia ny fidradradradrana mandrakariva fa amin'io andro io no iverenan'i dada. Efa hatramin'ny voalohany nandrenesako izay no nahalalako fa sarotra izany fahatongavany eto an-tanindrazany izany noho ny toe-java-misy.
Rehefa manahy ny mety ho trangan-javatra dia aleo mailo hatrany.
Ny harivan'ny 25 jona 2009 dia niomana ho amin'ny fandefasana afomanga etsy amin'ny farihin'ny Marais Masay ny mpanohana ny ara-dalàna, na ny marina kokoa dia izay no nolazain'ny mpitarika. Ny sarambambem-bahoaka no mamonjy io toerana malalaka dia malalaka io fa ny mpitari-tolona sy mpitarika fikambanana rehetra kosa mamonjy ny fivoriana manokana eny amin'ny Bel'Air Ampandrana araka ny fiantsoana natao ny omalin'io. Toerana efa fantatry ry zareo io na dia tsy lazaina ampahibemaso intsony aza. Teny Ampandrana no nakana an-keriny ny depiote Meme (Yves Aimé Rakotoarisoa) sy ireo niaraka taminy. Nisy ny nampandre ny namana mpitari-tolona avy hatrany raha vao nisy io tranga io ka niafenan'ny hafa. Nifanindran-dalana tamin'izany fakana an-keriny ny depiote Meme izany ihany koa ny nandrobàna ny fiara mpitondra ny fanamafisam-peo nahazo ny anaram-bositra hoe "Force One number Two". Ireo no fiandohan'ny teti-pandravana ny tolona nandritra ny fetim-pirenena.
Miandry fihetsika tsy voahevitra avy amin'ny mpitolona ho amin'ny ara-dalàna ny mpanongam-panjakana eto ary efa tsara petrapetraka mihitsy ny teti-panorona. Tezitra dia tezitra tokoa ireo mpandala ny ara-dalàna raha nahalala ny fisamborana sy ny fandrobàna fiara, tsy nety niala teo amoron'ny ranon'i Masay ry zareo raha tsy efa alimbe. Dia raikitra ny fifampiantsoana fa "hanao action" ny ampitso vao maraina ka hifamotoana eo ambavahady amin'ny valo ora maraina. Io no vovo nandrasan'ny mpanongam-pajakana satria raha vao misy ny fitenenana hoe "action" dia toa fanimbana sy fandravana avy hatrany no ao an-tsaina. Tsy misy akory manko ny filazana mazava hoe inona ilay "action" atao, hanaotao foana izany na miandry izay fihetsika ataon'ny iray amin'ny tangoron'olona dia raikitra izao. Tsy voatery ho mpitolona anefa no hanomboka izany fihetsika izany fa olona efa nahazo toromarika na voabaiko, ary mety ho ao anatin'ny singa mpandrava ny tolona mihitsy aza.
Tranga iray, mety ho tsy voamariky ny maro tamin'io famerimberenana ny "hanao action" io dia ny fihemoran'ny olona nihevitra ny hanao karazana fety teny amin'ny kianja malalaky ny Auditorium. Raha fianakaviana, ombam-bady aman-janaka no tokony ho tonga teny dia lasa ny tanora sy ny lehibe tena sahy sisa no nandeha noho ny fiahiana ny madinika, ny tsy tia gidragidra sy manahy indray sao hisy zavatra hanjo azy kosa naleony nijanona an-trano. Mihena be dia be avy hatrany ny isan'ny olona tokony ho tonga teny an-toerana tamin'io fotoana io. Nahazo isa 1 izany ny mpanongam-panjakana rehefa tsy vahoaka maro be araka izay nandrasana no tonga. Nahatsapa izany ve ny mpitolona?
Nampiverina ilalana olona vitsivitsy ihany koa ny tonga dia nibahanan'ny mpitandro ny filaminana ny vavahadin'ny Auditorium. Handrangitra ankolaka ny olona hiditra amin'ny herisetra sy ny fanaovana fihetsika tsy voahevitra ihany koa io. Tora-bato ahafahana miditra an-tsehatra handrava tanteraka ny tolona no tena nandrasany saingy nisy ny andian'olona avy hatrany dia nanatona azy ireo ka niresaka tamin'izy ireo. Namaly moa ny mpitandro ny filaminana fa tsy mikasa na oviana na oviana ny hitifitra azy ireo rehefa tsy misy izay antony anaovany izany. Tadiavin-dry zareo ny hidiran'ny olona am-pilaminana ny kianja malalaky ny Auditorium fa tsy hanelingelina kosa ny fifamoivoizana. Ny horakoraka tsy ifandrenesana nataon'ny olona teny ampita sy lafiny atsimo somary mihamaro no nampihemotra ireo mpitandro ny filaminana ireo haka ny toerana ery amin'ny siniben-tsolika ery amin'ny 250m avaratra ery.
Eto amin'izay ny tranga iray nampisalasala ny maro ihany koa. Misy amin'izay ny andian-jatovo nibahabahana ny vavahadin'ny Auditorium na/sy ny arabe mifanolotra aminy mazava loatra. Raha jerena ivelany dia ny fiarakodia no sakanan-dry zalahy tsy handalo amin'ny lalambahoaka (rehefa tsy nifanarahana tokony tsy hatao e!) nefa ny fidiran'ny olona any amin'ny kianja izay mifefy mihitsy no tsapako sakanan-dry zalahy ireto. Voatery nanakatona ny vavahady mandrakariva ireo efa tao anatin'ny kianja iavahana sy tsy iraisana amin'ireo eo ivelany raisina avy hatrany ho mpanakorontana ireo. Mety ho nisy ireo tena tezitra tamin'ireo zatovo ireo, saingy nahamarika kosa aho fa olona tsy te-hiditra velively ao an-kianja ry zareo fa nitady mandrakariva ny handehanan'ny olona hirohotra any amin'ny toerana tsy fantatra, izany hoe tsy hita nanjavonana ry zalahy raha misy ny olona voatarika hihataka ny kianja fivoriana. Mazava loatra fa lasa maro ireo olona no tsy sahy niditra tao an-kianja fa niandriandry hatrany eny ivelany ahafahany mitsoka haingana raha misy ny sanatria. Teo aho no nahatsikaritra fa misy tovovavy niezaka mandrakariva ny handresy lahatra ny tovolahy mbola tsy niditra ny kianja, fa ny nahafaly ahy dia maro tamin'ireo tovolahy nohatonin'izy ireo no nandà avy hatrany fa raha tsy baiko ery amin'ny sehatra mihitsy dia tsy hanao izany "action" izany. Lasa nanara-maso azy ireo mihitsy aho ka hitako fa tsy niditra ny kianja mihitsy izy ireo fa nisy tovolahy naka tamin'ny scooters. Hafa avy hatrany ny hevitro fa nokaramaina handrangitra mihitsy ry zareo.
Tonga fanindroany indray ny zandary! efa nakaton'ny mpitolona ny vavahady iavahana amin'ireo any ivelany. NIverina tsimoramora ihany ry zareo avy eo!
Tsy mbola nisy velively ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso hatreto.
Ny nanampy trotraka nahatonga ny fisavoritahana sy firoanahan'ny mpitolona tamin'io andro io ihany koa dia simba ny iray amin'ny "gropy" famelomana ny fanamafisam-peo hany ka megaphone mampalahelo no niezahana hanentanana ny olona saingy tsy nahasehaka ny hamaroana mihitsy izany. Efa tamin'ny roa folakandro mihitsy vao voaarina ny fahasimbana ka teo vao nanomboka ny fomban'ny tolona rehetra. Niezaka hatrany aho ny hiandry hatramin'ny farany saingy milòna loatra ry zareo ny fotoana an! adiny iray sy sasany re raha be indrindra dia ampy fa manjary mankalao ny olona e! sa izany ihany koa no tadiavinareo, hamonoanareo tsikelikely ity tolona hamerenana ny ara-dalàna ity?
Hahavita inona moa iny Megaphone iny?
Fomba iray nentina nitazonana ny olona tsy hivoaka any ivelany ihany koa ny nijoron-dRazily niaraka tamin'ny baiboly sy ny saina (mbola nalainy ny baiboly avy eo!)
Nandritra izany fotoana izany, nanao ny nataony amin'izay ry zalahy teo ivelany, nitoraka ny fiaraben'ny Kaominina ry zalahy! Hitako tsara ilay nitoraka, ary vatokely (natao hampitahorana sa tsy tena sahy?) no nalefany. Mety ho niandry ny hafa sahisahy kokoa izy ireo nefa... Ny tena naharangitra an-dry zalahy dia ireo miaramila Frantsay, nanao fanamiana Frantsay roa lahy nandeha fiara nandalo teo. Fandranitana ihany koa ve?
Nandritra ny hiram-pirenena. Nanangan-tsaina izay nitondra izany!
Nahofahofa izany avy eo!
Rehefa nandeha araka ny mahazatra ny fandaharam-potoana dia nihataka tsikelikely ireo "mpanakorontana" teo am-bavahady. Tsapako fa nihanilamina sy tsy hendratrendratra intsony ny olona ka lasa aho namonjy fodiana amin'izay. Gaga aho rehefa avy eo nandre fa noravan'ny mpitandro ny filaminana ry zareo rehefa tokony ho tamin'ny dimy ora folakandro teo ho eo. Tsorika fa tsy azoko mihitsy ny nahatonga izany fihetsiky ny mpitandro ny filaminana izany. Rehefa tonga moa ny alatsinainy dia tafavoaka indray ny depiote Yves Aimé (Meme) ka nolazaina taminy fa afa-mivoaka izy satria tsy misy ny vesatra ahafahana mitazona azy. Resaka baomba manko no nilazana fa antony voalohany nisamborana azy. Izay no naharesy lahatra ahy tanteraka fa nisy tetika maty paika handravana ny tolona tao saingy nahombiazana kosa ry zareo tamin'ny fampiverenana ny olona tsy hiditra tao an-kianja, ireo tena sahy nefa tsy mila gidragidra sisa no nahasahy nitsofoka lalina. Tadidio fa misy vaovao tselatra hatrany ao amin'ny twitter-ko.
Nandritra ny hiram-pitolomana kosa ity sary ity! tsikaritrareo ihany angamba ny totohondrin'iny olona sady mihira.
An-dalana hody kosa izao rehefa nieritreritra fa tsy hisy zava-mitranga intsony!
jentilisa 5 jolay 2009, amin'ny 13: 44